Korea Atsimo: Ady seza-na metro eo amin’ireo taranaka tsy mitovy fotoana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2010 12:04 GMT
Vakio amin'ny teny 简体中文, 繁體中文, Français, Español, বাংলা, English
Tranga iray nahazendana vahiny iray izay voalohany no tonga tao Korea ny nahita seza telo tery amin’ny zoron’ny metro nefa tsy misy sahy mipetraka. Matetika ireo mpizahatany no vavolombelona manatri-maso ny zava-mitranga tsy dia mahazatra loatra ahitana zatovo na vatombatony sendra makamaka aina amin’ireny seza voatokana ireny mitsamboatra mitsangana tampoka raha misy zokiolona avy manatona
Noyak no iantsoana io seza io, fomba iray ilazana ny toeram-piantsonana natokana ho an’ny sembana, natokana ho an’ireo efa voky andro sy osa. Na dia lazaina aza fa ny Noyak dia natao ho an’ny antitra, sembana, vehivavy bevohoka na vehivavy mitaiza kely, matetika dia ny beantitra no tena mibodo azy ireny.
Be ny fitarainana momba ny fihetsika maherisetra ataon’ireny zokiolona ireny amin’ny fakàna ireny seza ireny no taterina any anatin’ireo media ao an-toerana sy any anaty blaogy any. Misy ireo zokiolona no manositosika ireo mpianatra efa reraka, olona eo amin’ny 20 na 30 taona eo, ary vehivavy tanora bevohoka mba hiala amin’ilay seza. Maro ireo zokiolona ireo no mandaka ara-bakiteny sy mihaza ireo tanora amin’ny tehina eny aminy mba hialan’ireto farany amin’ny seza. Ny taimbava mandratra atao amin’ireo tanora sy mahatonga azy ireo ho sadaikatra mafy tokoa mandra-pialana amin’ny sezany dia efa zavatra fahita matetika any anaty metro, ny sasany aza moa tonga mihitsy hatrany amin’ny fanozonana ireo reny niteraka satria hoe tsy nampianatra fahalalam-pomba sy fanajana ny zokiolona an’ireo zanany. Ireny fifandonana ireny, raha sendra manapa-kevitra ny hamaly ilay tanora, dia matetika no mivadika fifampivazavazana eo amin’ny andaniny sy ny ankilany, fifampikasihan-tànana na hatrany amin’ny fandratràna sy fifanenjehana araka ny lalàna ataon’ny media ao an-toerana ambetin-dresaka.
Ny gazety koreana tatsimo Hankook Ilbo dia namoaka ny tatitry ny orinasa mpitantana ny metro ao Seoul izay mampiseho ny firongatry ny fifanandrinan’ireo zokiolona mitaky ny zony amin’ny fampiasana ny Noyak, sy ireo tanora beloha izay matetika misafidy ny tsy hanome haja.
Araka ny tatitry ny Seoul Metropolitan Rapid Transit Corporation (miandraikitra ny zotrana metro faha-5 sy faha-8), fitarainana 121 mikasika ady seza no voaray tamin’ny taona lasa. Ny Janoary hatramin’ny Aprily tamin’ity taona ity, efa tafakatra ho 84 sahady ny tranga voarakitra, manamarika fiakarana mazava izany.
Omena maimaim-poana ny tapakilana metro ho an’ny olona maherin’ny 65 taona ary ampiasain’ireo zokiolona izany maha maimaimpoana azy izany mba hipetrahana foana hatrany amin’ny fara-fiantsonana. Karsonic, mpitoraka blaogy iray dia nanoritra fa na dia azo takarina ihany aza ny fanamaroana ireo seza Noyak any anaty metro raha ny fihazakazaky ny fahanteran’ny vahoaka koreana no jerena, ireo be antitra dia lasa mpivenjivenjy malalaka ao anaty fiarahamonina miteraka fatiantoka goavana ara-bola.
Satria maro ireo olona manondro mivantana ny tsy fahampian’ireo seza Noyak noho ny fiarahamonina Koreana mankany amin’ny fahanterana, dia nanapa-kevitra ireo orinasa mpitantana ny metro fa hanampy isa ireo seza Noyak. Saingy ny olana dia ireto zokiolona ireto mandeha maimaimpoana tsy mandoa vola, na dia singana penny iray monja aza. Manararaotra loatra an’ireo tapakila maimaimpoana ireny ireo olona ireo mba hivezivezena eraky ny làlana mandroso sy miverina toy ny any amin’ny Soyo Mt. station, Cheonan station ary Inchon station ka miteraka fatiantoka ara-bola goavambe ho an’ny orinasa.
Ireo olona maherin’ny 60 taona dia ireo sisam-paty tamin’ny adin’i Korea izay nandrava ny taniben’i Korea, ireo izay nizaka ny fepetra tsy refesi-mandidy sy ny fiovana mahery vaikan’ny fikisahan’ny fiarahamonina KoreanaTatsimo niala tamin’ny fifotorana amin’ny asa fanajariana ny tany ho amin’ny fampiroboroboana ny indostria ary tao anatin’ny taonjato iray latsaka kely dia lasa fiarahamonina mifototra amin’ny fahalalàna sy ny fahaizana.
‘Yoon Tae’ mpitoraka blaogy ao amin’ny Daum ‘ dia nampivoitra fa ireo zokiolona dia ireo nizaka ny fotoana sarotra indrindra nodiavin’ny tantaran’i Korea fony mbola natokana ho ana vondron’olona azo nisaina tamin’ny rantsan-tànana ny fanabeazana maoderna sy sahaza ka ankehitriny izy ireny dia mihevitra ny tenany ho toy ny nahiliky ny fiarahamonina.
Tsy nisy nahazo fanabeazana sahaza izany ireo zokiolona ao Korea hatramin’ny nahaterahan-dry zareo ary nitombo tao anatina vanimpotoana sarotra (ara-tantara). Satria efa antitra izy ireo, mahatsapa ry zareo fa tokony hahazo onitra ary sahala amin’ny mihevitra fa tsy mahazo ny anjarany…
Ny filàna maika nisy teo amin’ny Korea Atsimo mba hijoro ho tena firenena sy hifaninana amin’I Korea Avaratra dia niteraka firoboroboana ara-toekarena nampivanaka saiky tamin’ny sehatra rehetra mihitsy, saingy novidiana lafo izany ho an’ny ampahany sasany tao amin’ny fiarahamonina. Hayan111, mpitoraka blaogy ao amin’ny Naver dia nanamarika fa ny nametrahan’i Korea ny firoboroboana ara-toekarena ho laharam-pahamehana dia nitarika tany amin’ny tsy fijerena ny zon’ny sasany, ary dia miverina mitaky ny toerany eo anivon’ny fiarahamonina ireo beantitra.
Nihen-danja ny toerana (zo) misy ireo beantitra, tsy hoe noho izy ireo tsy nahavita niditra tao anatin’ity fiarahamonina haingam-pivoatra ity fotsiny, fa satria koa ny fiarahamonina Koreana dia tsy nijery afa-tsy ny fikatsahana fandroasoana sy tena nanamaivana ny zon’ny beantitra. Noho ireo beantitra ireo tsy afaka mizaka tena, nanjary toa lasa zava-tsarotra ny hiandrandra fanajana avy amin’ny olona satria hoe antitra izy ireo. Miezaka ny hamerina na dia ampahany monja amin’izay hajan’izy ireo veriny ireo zokiolona amin’ny fibodoana ny sezan’ny metro. Na izany aza raha tsy vitan’izy ireo ny manangona fahendrena sy fahamendrehana andrasana amin-dry zareo noho ny maha-be taona azy, tsy hisy paradisa azo hanajana an-dry zareo amin’izany.
Ny fametrahana seza Noyak maro fanampiny dia nanainga fanakianana mivaivay avy amin’ireo tanora vao misondrotra ary nisy mihitsy aza olona sasany nandroso hevitra ny amin’ny tokony hametrahana fiaran-dalamby natao ho an’ny antitra samirery. Noho ny fifampitankosenana dia toa tsy azo ihodivirana ny fifandirana any anaty metron’ny Seoul.